ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ)
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ)
မြစ်စုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မလုပ်တော့ဘူးလို့ အပြတ်ကို ပြောလိုက်သင့်တယ်။ ဒီလိုပြောလိုက်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ နှစ်သက် သဘောကျမှုကို အပြည့်အ၀ ရမယ်ဆိုတာ သိပ်သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်က အဘကြီးရဲ့ မျက်နှာကိုလည်း ငဲ့ရသေးတော့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောသွားပုံရတယ်။
ဦးရွှေမန်းစကားပြောတာ ဒီလိုပဲလားဟေ အချော်တကောက်လိုလို တမင်ခိူသာအောင်လုပ်ပြောသလိုကြီး ဖြေဆိုချက်တွေကလည်း ပြတ်သားရှင်းမှု မရှိသလို ပဲ ပါးစပ်လည်းပြဲသေးတယ် ကံကောင်းပါစေ ၂၀၁၅ ---မှာ မထင်တော့ မထင်ဘူး နော့
ကျူးလွန် တာတချို. လောက် နမူနာ ... နှိမ်နင်း အရေးယူ
They like playing Country people blood and lives and properties so much. Idiot betrayer cheater stupid.
Still have authority, no quality, very professional in betraying people.
Do not like him and team (Than Shwe, Thein Sein, Htay Oo, members). He, Htay Oo & Khin Mg Than stays near Than Shwe family house in Sanchang. He & Thein Sein & Htay Oo are member of the best men Killer Than Shwe.
Actor Lwin Moe also near them.
Shameless he dared to speak out this sentence.
အပြောနဲ့ အလုပ် ညီကြပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးနိုင်ငယ်ညင်း တောတွင်းသီအိုရီ ကို ကျင့်သုံးနေတာကြာပြ
အခုမှ အမှန်အတိုင်းပြောလာတဲ့ကညွှတ်ကွှုင်းသား အဘဦးရွှေမ်န်း ကိုအား
ကိုးလာကြပါတယ်။ ၂၀၁၅ ကို စိတ်အေးချင်ရင် ပါတီတွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွေ
တိုက်တွန်းလိုတာကတော့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့
ဝန်ထမ်းတွေ နောင်ရေးစိတ်အေးအောင် နေအိမ် အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်
ပါတယ်။ တိုင်အဆင့် တွေမှာလဲ အထက်ဖား အောက်ဖိ ဌာနအကြီးအကဲတွေ
ကုန်သည်ပွဲစားတွေ ကျရင် ရှိသမျှသွား အကုန်ဖြဲပြီး ပြုံး ပြီးဆက်ဆံတယ်
ဟာသတွေ ကလဲပြောလိုက်တာ လူရွှင်တော်တွေ ကတောင် အရံ့းပေးရမယ်
ကိုယ်ရုံးက အရာထမ်းအမှုထမ်းတွေ ကျတော့ သူလုပ်စာကိုစားနေတဲ့သူ
တွေကျနေတာပဲ မျက်နှာကိုသုန်မှူံ နေတာပဲ ဆဲ ဆိုတာလဲ လွန်ရော
အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုတောင် အားမနာဘူး။ ခါးအောက်ကပစ္စည်းတွေ
တွေ့နေရတာက အာဏာအပြည့်ရနေတဲ့ စည်ပင်ညွှန်မှုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်
သမ္မတကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီးတို့ မှ မိမိတိုရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့
ကျန်းမာစွာနဲ့ သာသနာအကျိုးတိုင်းပြည့်အကျိုး ဒိထက်မက သယ်ပိုးဆောင်